NDIPHI UMNTU ODUMILEYO OQHUTYWA E-AUSTRALIA? INDAWO YEKAMPU YASEJUNGLE-IRADIO TIMES - UMABONAKUDE WENYANI
Ndiphi ndiqhutywa nguSaziwayo? Indawo entsha yenqaba yaseJungle
Eyona Umabonakude Wenyani
Emva kothotho olwenziweyo, ndingu-A 2020 wodumo oza esiphelweni ngobu busuku kunye nomdlalo wokugqibela, apho omnye wabathathu abashiyekileyo abaza kuba ngukumkani okanye ukumkanikazi wenqaba.
Uluhlu lwenyani olusebenze ixesha elide lushicilelwe e-Australia, kodwa bamisa inkampu eGwrych castle eMantla Wales kulo nyaka ngenxa yezithintelo zohambo ezibangelwa ngubhubhane we-coronavirus.
Ngelixa abanye abalandeli bexhalabile malunga nokuba olu tshintsho lukhulu luya kuwuchaphazela njani umboniso, kubonakala ngathi boyisiwe ngokupheleleyo ngumtsalane we-quirky onikezelwa ngulo seto lutsha.
Ngapha koko, uvoto olwenziwe RadioTimes.com ifumanise ukuba abalandeli ababini kwabathathu ndingumlandeli weCeleb bakhetha ukuseta inqaba kwindawo yemveli yehlathi.
Ukwamkelwa okufudumeleyo kuthotho lwamva nje kushiye ndingumboniso weCeleb uRichard Cowles evulelekileyo kwithemba lokuhlala eWales kunyaka olandelayo, nangona kungekho sigqibo sokugqibela esele senziwe.
Nantsi yonke into ofuna ukuyifumana malunga nendawo entsha yokuba ndingu-A 2020.
Ndiphi bhanya-bhanya yoSaziwayo wase-UK?
Kwaqinisekiswa nge-Agasti ka-2020 ukuba inqaba yaseGwrych yase-Abergele, eMantla eWales iyakusetyenziswa njengeyona ndawo iphambili kuthotho olutsha.
Inqaba ibekwe kwiihektare ezingama-250 zegadi kunye nomhlaba, kunye neembono zelizwe laseWelsh ukusuka kwinduli enomthi ejonge ulwandle lwaseIreland, kodwa abantu abadumileyo banokuba sisoyikiso - ngokubona imiphefumlo eliqela kuye kwaxelwa kwinqaba.
UGqr Mark Baker, uSihlalo weGwrych Castle Preservation Trust uxelele IChronicle Live: Ndonwabe nyhani ukuba ndinguMntu oDumileyo ndikhethe iGwrych castle ukuba ibe yindawo yase-UK kuthotho lwee-2020.
Inqaba yaseGwrych linqanaba elihle endilidwelisileyo 19thindlu yommandla kunye nendawo ekumele ukuba uyibone kubakhenkethi abatyelele iWales.
NdinguSaziwayo ukuba lapha kuya kunceda inkxaso yeNqaba yaseGwrych kunye nokubuyiselwa kwayo okuqhubekayo kunye nokunika ingingqi amandla afunekayo kwezoqoqosho.
Umboniso wemikhosi u-Ant kunye no-Dec kutshanje babelane ngezithombe zabo kwindlela eya kwindawo entsha yenqaba.
Uhambo olukhawulezayo oluya eWales kukhangelwa i #imaceleb inqaba. Ukuba nje bekukho umqondiso… baqhula ecaleni komfanekiso.
Uhambo olukhawulezayo oluya eWales kukhangelwa i #imaceleb inqaba. Ukuba kuphela bekukho umqondiso… ???????????????????????????????????? @IFani_Haymani pic.twitter.com/MyT3OkrJrr
- antanddec (@antanddec) NgoSeptemba 30, 2020
Kwikliphu entsha ye-trailer, ii-duo zikwabonwa zihamba zinqumla ibhulorho kwimvula enethayo.
Ewe, eli lelona hlobo lasehlotyeni elibandayo e-Australia, u-Dec uthi, njengo-Ant chimes ku: Silahlekile!
Ndiza kujonga imephu, uDis ke aphendule, athi Imbovane: Libala imephu. Ixesha lokufaka iteknoloji yenkulungwane yama-21, kwaye ukhupha ifowuni yakhe epokothweni.
Emva koko uthetha kwifowuni yakhe abuze ukuba ungasichazela indlela yokumisa inkampu apha? Inkonzo yokwamkelwa kwelizwi iyaphendula, icaphula igama lendlela ende e-Welsh, ekungekho namnye kubo onokuyiqonda.
Emva kweyeThupha kwatyhilwa ukuba indawo yesibini izakusetyenziswa, kunye nefama yaseMntla Wales ekufutshane neGwrych Castle eza kusetyenziswa kulo mboniso.
IManorafon Farm Park ibhukishwe ukuze isetyenziswe kuphela ngabavelisi balo mboniso, kwaye ukujonga iwebhusayithi yefama kutyhila umbono wokuba ingaba izakuba yintoni i-celebs, kunye necandelo elithi 'Hlola', sineHutt Hut egcweleyo kubagxeki abanomdla.
Ndiphi ndiqhutywa nguSaziwayo?
Ukusukela kuthotho lwesibini ngo-2003, ndingu-A Celeb ebekwe eMurwillumbah eNew South Wales, efotwa ngaphakathi kwePrincebrook National Park.
Kwaye ngelixa kwiscreen yonke oyibonayo yinkampu uqobo kunye nothotho lweebhulorho zokumiswa kunye nesitudiyo apho usasazo luka-Ant no-Dec lusasaza khona, kuninzi okungaphaya okuqhubekayo emva kwezigcawu.
Imveliso yanda ngaphaya kwento ebonakalayo kwikhamera, eneziko lonyango kwisiza, indawo yokugcina iprops kunye nendawo apho usapho kunye nabahlobo babantu abadumileyo bahlangana kusasa ekuseni kukhutshiso ngalunye.
Dungay Creek, NdiyiNkampu yeCeleb
Nangona kunjalo, umboniso uxelwa ukuba usuka kwindawo yelifa le-UNESCO xa ikhontrakthi yangoku iphela ngo-2020. Ngokutsho kweLanga, abavelisi baxoxa ngokuhambisa umboniso kwisiQithi seKangaroo kwixesha elizayo-nangona oku kungaqinisekiswanga. .
Bahlala phi abadumileyo emva kokuba bemkile enkampini?
Emva kwesitayile esiphila ngerayisi kunye neembotyi, ukunyamezela imvula ebandayo kunye nokubandezeleka kwezinambuzane ezininzi, iiselebs zibangelwa kukunethezeka.
Ngokwesiqhelo, umntu ngamnye okhuphisanayo ogxothwayo ubekwa kwihotele yeenkwenkwezi ezintlanu eVersace eSurfers Paradise ngeR & R efunekayo. Emva kokuba bephantsi kolawulo lwehlathi kunye novavanyo lweBushtucker, ngokuqinisekileyo bayifumene. Palazzo Versace Ihotele nawe, ukuba une isibini samakhulu eeponti ngobusuku ukusindisa ...
Azikho iindaba okwangoku malunga nokuba yeyiphi indawo yobumnandi i-celebs eya kubalekela kuyo emva kwenqaba, kodwa ukuba kukho nantoni na efana neVerace Hotel, kuya kuba kuhle ukuba uzitye zonke ezo zinto zirhubuluzayo.
Ndingusaziwayo oza kubuyela kwi-ITV ngasekupheleni konyaka. Ukuba ujonge into oza kuyibukela ngokuhlwanje, jonga isikhokelo sethu seTV.
Iifilimu ezilungileyo kwi-disney kunye ne-uk
loluphi uthotho lokubukela kwi-netflix
Masvidal vs usman uk ixesha
ufile kum ixesha lesibini
dan stevens ubuhle kunye nesilo